Filannoo Aljeeriyaa: Ministirri muummee duraanii Pireezdaantummaan muudaman - BBC News Afaan Oromoo
Filannoo Aljeeriyaa: Ministirri muummee duraanii Pireezdaantummaan muudaman
Albelmajiid Tebuune (bitaarra)
Ministirri muummee Aljeeriyaa duraanii kan turaniifi miseensa paartii Aljeeriyaa yeroo dheeraaf bulchaa ture, Adda bilisummaa biyyaaleessa (FLN) kan ta'an Albelmajiid Tebuune, pireezdaantii biyyatti haaraa ta'uun har'a ifatti aangoo fudhataniiru.
Mr. Tebuune aangosaanii ifatti har'a kan fudhatan sirna masaraa mootummaa kan magaalaa Aljeersitti tamsaasa TV kallattiin dabarfamee irratti kakuu raawwachuun ture.
Mormiin guddaa kan taasifamaa ture ta'ulleen, filannoo biyyaaleessa Muddee 12 gaggeefameen sagalee parsantaa 58 argachuun injifataniiru.
Haa ta'u malees battalamu bu'aan filannoo Mudde 13 labsameen booda TV biyyaaleessaa hima ibsa isaa ''filannoo Aljeeriyaa'' irraa gara ''Mo'ataa Aljeeriyaatti'' geedaree ture.
Jimaata darbe ammoo namootni kumaatamaan lakka'aaman Mr Tebuunee kan pirezdaantii duranii aangoorraa kaafame; Abdelaziz Botifikaaf amanamaa tran mormuun dhaadannoowwan qabachuun daandiwwan Aljeersitti hiriraaf ba'aniiru.
Mormiitonni kun dhaabbatni siyaasaa kun guutummaan akka badu gaafachaa turani.
Mormiitoonni "Bu'aan filannoo kanaa sirri miti. Filannoon keessaniif dhimma hin qabnu, pirezdaantiin keessannis nu hin bulchuu," jechuun dhaadacha turani.
Bootifikaan waggaa jaha dura dhibee istrokiin erga mudateen booda haalaan adeemuus ta'e haasa'uu hin danda'u ture. Kun immoo namoota hedduu biratti gaaffii akkamiin biyyatti bulchaa jira jedhu kaase ture.
Botifikaan mormii guddaa biyyaatti guuttutti gaggeefame booda aangoo waggoota digdamaaf irra turan baatii Ebla keessa gadhiisaniiru
Oduu kana waliin walitti dhiyaatan biroof:
Kumaatamoonni Aljersitti warraaqsi haaran akka eegalu gaafatan
'Poolisiin Aljeeriyaa obboleessa pirezidaantii duraanii Buteefilikaa adabe'
Aljeeriyaan filannoo dura ministiroota mummee duraanii lama hiite
11 Muddee 2019
Mormii Aljeeriyaa: Kumaatmoonni Aljersitti warraaqsi haaran akka eegalu gaafatan
Fincila Aljeeriyaa: 'Obboleessi Butefilikaa fi hoggantootni humna tikaa lama hidhaman'